Tag: nharembozha app kushambadzira | Martech Zone
Tag: nharembozha yekushambadzira
Tine kutanga, makambani akasimbiswa, uye kunyangwe akanyanya-analytics uye akaomesesa makambani anouya kwatiri kuzobatsirwa kuwedzera bhizinesi ravo repamhepo. Kunyangwe saizi kana hunyanzvi, kana isu tikabvunza nezve avo-mutengo-wega-kutora uye kukosha kwehupenyu hwese (LTV) yemutengi, isu tinowanzo sangana nekutarisa kusine chinhu. Makambani akawandisa anoverenga mabhajeti zviri nyore: Nemaonero aya, kushambadzira kunokwira kuenda mukoramu yemari. Asi kushambadzira hakusi kubhadharisa senge rendi yako… zviri
Isu munguva pfupi yapfuura takagovana yakakwira mutengo uye kukundikana kweyemabhizinesi mafoni ekushandisa, asi mabhenefiti eakanaka mbozhanhare app angori akakurisa kuregeredza. Pamwe chete nekuronga kuve chinhu chakakomba, ruzivo rwechikwata chekusimudzira nhare nekusimudzirwa kweapp zviri zviviri zvakakosha. App yako inogona kukwira kumusoro kwekutsvaga kwevanhu vese kuti itonge pamusika wefoni. Zadzisa iwo mazano mukati meiyo infographic yeGwara rekusimudzira Yako